၂၀၁၇ မန်ချက်စတာ ဇာတ်ရုံ ဗုံးကွဲခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၁၇ မန်ချက်စတာ ဇာတ်ရုံ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု
ဇာတ်ရုံ အပြင်ဘက် (၂၀၁၀)
၂၀၁၇ မန်ချက်စတာ ဇာတ်ရုံ ဗုံးကွဲခြင်း (Greater Manchester)
Greater Manchester၏ မြေပုံကို ပြသရန်
၂၀၁၇ မန်ချက်စတာ ဇာတ်ရုံ ဗုံးကွဲခြင်း (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ မြေပုံကို ပြသရန်
မန်ချက်စတာမြို့၊ အင်္ဂလန်၊ ယူကေ။
၂၂ မေ ၂၀၁၇ (၂၀၁၇-၀၅-၂၂)
၂၂:၃၀ ဝန်းကျင် (BST)
၂၃ (တိုက်ခိုက်သူ အပါအဝင်)
၂၂ မေ ၂၀၁၇၊ ကန်အဆိုတော် အရီယာနာ ဂရန်ဒီ ၏ ဖျော်ဖြေပွဲ ပြီးနောက် အင်္ဂလန်၊ မန်ချက်စတာမြို့၊ မန်ချက်စတာဇာတ်ရုံ၌ အသေခံဗုံးခွဲမှု ဖြစ်ပွားသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အတည်ပြုချက်အရ တိုက်ခိုက်သူမှာ ဆာမန် ရမဒန် အဘဲဒီ (Salman Ramadan Abedi) ဖြစ်ကာ ၂၂ နှစ် ရှိသော လစ်ဗျားလူမျိုး ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ဖြစ်ပြီး၊ ပွဲလာသူများ ဇာတ်ရုံထဲမှ ထွက်နေစဉ် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းကို စနက်တံ ဖြုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အဘဲဒီအပါ လူ ၂၃ ဦး သေဆုံး၊ အနည်းဆုံး ၁၂၀ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
၇ အခြားလည်း ကြည့်
၂၂ မေ ၂၀၁၇၊ ဗြိတိန်စံတော်ချိန် ၂၂.၃၀ နာရီတွင် (UTC+01:00), အသေခံဗုံးခွဲသူသည် မန်ချက်စတာဇာတ်ရုံ စင်္ကြံလမ်းတွင် ဝက်အူရစ်များ(ဘိုးနှင့် နတ်)ထည့်ထားသော ဖောက်ခွဲပစ္စည်းကို စနက်တံ ဖြုတ်ခဲ့သည်။ အရီယာနာ ဂရန်ဒီ၏ ၂၀၁၇ အန္တရာယ်များတဲ့ မိန်းမသားနယ်လှည့်ဖျော်ဖြေပွဲ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်သော ဖျော်ဖြေပွဲ ပြီးနောက် တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဖျော်ဖြေပွဲ လက်မှတ်များ ရောင်းကုန်ခဲ့ပြီး၊ ၁၂၀၀၀ နှင့်အထက် ပရိသတ်များ တက်ခဲ့သည်။ ပေါက်ကွဲစဉ်က လူအများစုသည် စင်္ကြံကို ဖြတ်၍ အပြင်ထွက်နေပြီး၊ ဖျော်ဖြေပွဲအမှတ်တရများ ဝယ်ရန် စုရုံးနေချိန် ဖြစ်သည်။
မန်ချက်စတာ ရဲတပ်ဖွဲ့က မတော်တဆမှုသည် အသေခံ ဗုံးခွဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသောအခါ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ယင်းသည် ၇ ဇူလိုင် ၂၀၀၅ လန်ဒန်ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ပြီးကတည်းက အင်္ဂလန်တွင် လူသေအများဆုံး တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၉၆ အိုင်အာရ်အေ ဗုံးခွဲမှုပြီးနောက် မန်ချက်စတာတွင် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်သည်။
ရဲက ပြောသည်မှာ ဗုံးခွဲသူအပါ လူ ၂၃ ဦး ပေါက်ကွဲစဉ် သေဆုံးကာ၊ အနည်းဆုံး ၁၂၀ ဦး ဒဏ်ရာ ရသည်ဟု ဆိုသည်။ အနောက်မြောက် လူနာတင်ကား ဝန်ဆောင်မှုက အခင်းဖြစ်ရာသို့ ၎င်း၏ လူနာတင်ကား ၆၀ စီး ရောက်ရှိပြီး၊ ၅၉ ဦးကို ဒေသဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကာ၊ အခင်းဖြစ်ရာတွင် ဒဏ်ရာရလျက် လမ်းလျှောက်နေသူများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြောင်း တင်ပြသည်။ ဆေးရုံတက်ရသူများတွင်၊ ၁၆ နှစ်အောက် ကလေးငယ် ၁၂ ယောက် ပါသည်ဟု ဆိုသည်။ ၂၅ မေလ ညနေရောက်သောအခါ၊ သေဆုံးသူ ၂၂ ဦး၏ အမည်ကို တပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကလေးမ ၇ ဦးပါပြီး၊ တဦးမှာ ၈ နှစ်သား၊ ကျန် ခုနစ်ဦးမှာ ၁၄ မှ ၁၉ နှစ်ထိ ရှိပြီး၊ ဂျူတီအားသော ရဲအရာရှိ တစ်ဦးလည်း ပါသည်။
ဗလီတခုတွင် တွေ့ရသော Salman Ramadan Abedi
အသေခံဗုံးခွဲသူသည် ဆွန်နီအစ္စလာမ်ကို ယုံကြည်သော ၂၂ နှစ်ရှိ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ဖြစ်သည်။ ဆာမန် ရမဒန် အဘဲဒီသည် ဗြိတိန် လုံခြုံရေးဌာနမှ ဖြစ်သည်။ သူ့ကို လစ်ဗျားမှ တောင်မန်ချက်စတာတွင် အခြေချ နေထိုင်သော ဒုက္ခသည်မိသားစုမှ ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၄ တွင် မွေးသည်။ သူသည် ဝါလီရိန်းဒေသတွင် ကြီးပြင်းပြီး၊ မန်ချက်စတာမြို့ ဆင်ခြေဖုံးဖြစ်သော ဖဲလိုးဖီး၌ နေထိုင်သည်။ ဆာမန်နှင့် သူ့ညီကိုသည် ဒိစဘာရီ ဗလီတွင် ဝတ်ပြုသည်ဟု သိရသည်။ ဗလီရှိ ဝါရင့်သူတဦးမှ ပြောရာတွင် သူက အိုင်အက်စ်အကြောင်း ဆန့်ကျင် ဟောပြောသောအခါ အဘဲဒီသည် မုန်းတီးမျက်လုံးနှင့် စိုက်ကြည့်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
နှစ်ဦးစလုံး ထရီပလီတွင် မွေးသော အဘဲဒီမိဘများသည် မူအာမာ ဂဒါဖီ သေဆုံးပြီးနောက် ၂၀၁၁ ၌ လစ်ဗျား ပြန်သွားစဉ်၊ အဘဲဒီမှာမူ အင်္ဂလန်၌သာ ကျန်နေခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ၌၊ ဆာလ်ဖို့တက္ကသိုလ်၌ ကျောင်းသား ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ မနုတ်ထွက်ခင်က စီးပွားစီမံမေဂျာကို လေ့လာသည်။ အဘဲဒီသည် မုန့်ဆိုင်၌ အလုပ်လုပ်ပြီး၊ သူ့သူငယ်ချင်းများက သူ ဘောလုံးကန်တော်ကြောင်း ပြောကြသည်။ ဂိုဏ်းများ အိုင်အက်စ်များတွင် ပါဝင်ကြောင်း သတင်းထွက်နေပြီး၊ ပြင်သစ် အတွင်းဝန် ဂါးရတ် ကိုလွန်က အိုင်အက်စ်တွေနဲ့ အချိတ်အချက် ရှိပြီး၊ ဆီးရီးယားကို သွားခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်ဟု ဆိုသည်။ သူကို သိကျွမ်းသူ တယောက် ပြောအရ၊ လစ်ဗျားမှာ နေသော အဘဲဒီမိဘများသည် သူ၏ အစွန်းရောက်ခြင်းကို စိတ်ပူနေခဲ့သည် ဆိုသည်။ သူတို့က သူ၏ ဗြိတိန်ပတ်စပို့ကို သိမ်းထားသော်လည်း သူက မက္ကာ သွားမည်ဟု လိမ်ညာပြောဆိုခဲ့ရာ ပြန်ပေးခဲ့သည်။ မူစလင်လောကက အလုပ်သမားတဦးက ပြောရာတွင် အဖွဲ့အစည်းက တိုက်ခိုက်မှု မတိုင်မီ လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်က ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကို သတိပေးခဲ့သည် ဆိုသည်။ အဖွဲ့အစည်းက အဘဲဒီသည် "အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ထောက်ခံတယ်"ဟု မှတ်ချက်ရေးခဲ့ကြောင်း သတိပေးသော်လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ မည်သည့် အရေးယူမှုမျိုးမှ မရှိခဲ့ချေ။
အဘဲဒီနေထိုင်သော ဖဲလိုးဖီးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ဗုံးကွဲမှု ပြီးနောက် ရဲများ စုံစမ်းရေးပစ်မှတ် ဖြစ်လာသည်။ ရဲများသည် အိမ်ကို လက်နက်အပြည့်အစုံနှင့် ဝင်စီးသည်။ ၂၃ နှစ်ရှိ အစ်ကို အစ်မေးကို တောင်မန်ချက်စတာရှိ ခေါတန်ကမ်ဟာဒီဆင်ခြေဖုံး၌ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းဆီးသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် တောင်မန်ချက်စတာ အခြား နှစ်နေရာကိုလည်း ရှာပြီး၊ ဝါလီရိန်းဒေသမှ လိပ်စာတစ်ခုကိုလည်း ရှာသည်။ နောက်ထပ်လူသုံးဦးကို ဖမ်းဆီးပြီး ဗုံးခွဲသူကို ထောက်ပံ့နေသည့် အကြမ်းဖက်ကွန်ယက်နှင့် အလားတူဟု ပြောသည်။
ဆီးရီးယားမှ မကြာသေးခင်က ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရပြီး၊ အေဂျင်စီက သူသည် တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်နေသလား သိရန် ကြိုးစားနေသည်။ ပြင်သစ်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဂါးရတ် ကိုလွန်က ပြင်သစ် တီဗီချယ်နယ်လိုင်းတွင် အဘဲဒီသည် ဆီးရီးယား သွားပြီး၊ အိုင်အက်စ်နှင့် ဆက်နွယ်ကြောင်း ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ တိုက်ခိုက်သူ၏ ဖခင်နှင့် ညီကို လစ်ဗျားအာဏာပိုင်များက မေ ၂၃ နှင့် ၂၄ တွင် အသီးသီး ဖမ်းဆီးသည်။ သူ့ညီသည် လစ်ဗျားတွင် တိုက်ခိုက်မှု ပြုရန် ကြံစည်နေကြောင်း၊ ဆာမန်နှင့် ပုံမှန်အဆက်အသွယ် ရှိကြောင်းနှင့် မန်ချက်စတာဇာတ်ရုံ ဗုံးခွဲမည့် အကြံကို သိရှိနေကြောင်း ဆိုကြသည်။၂၅ မေ အထိ လူ ရှစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းသိမ်းထားသည်။
နယူးယောက်တိုင်းမှ ထုတ်သည့် IED အကြွင်းအကျန် ဓာတ်ပုံများအရ ၎င်းသည် အပြာရောင်ကျောပိုးအိတ် သို့မဟုတ် အနက်ရောင် စွပ်ကျယ်အတွင်း သယ်ဆောင်လာသော ပေါ့ပါးသည့် သတ္တုခွက်ထဲ ပေါက်ကွဲပစ္စည်း ထည့်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ ဗုံးခွဲသူ ပတ်ပတ်လည်ကို သေဆုံးမှုအများစု ဖြစ်စေသည်။ သူကိုယ်သည် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တံခါးမှ တဆင့် ရုံထဲ လွင့်စဉ်သွားသည့် အချက်က ညွှန်ပြနေသည်မှာ ဗုံးသည် ကျောပိုးအိတ်ထဲ ထည့်ထား၍ စနက်တံ ဖြုတ်လိုက်သည့်အခါ အရှေ့သို့ လွင့်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ လက်ကိုင်စနက်တံဟု ယူဆနိုင်သည့် ကိရိယာငယ်ကိုလည်း ရှာတွေ့သည်။
ပြင်သစ်နှင့် ကန်ရှိ လုံခြုံရေးဌာနသို့ ပေးအပ်သော အဘဲဒီနာမည်နှင့် အခြား အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက်များသည် ဗုံးပေါက်ပြီး နာရီပိုင်းအတွင်း သတင်းမီဒီယာများသို့ ပေါက်ကြားခြင်းကြောင့် စိတ်ပျက်မိကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အမ္ဘာ ရုဒ်က ၎င်းသည် စစ်ဆေးရေးကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေပြီး၊ ဖောက်ခွဲသူနှင့် အပေါင်းအပါများကို သတိပေးသလို ဖြစ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် လိုသည်ဟု ပြောသည်။ သူမက ကန်ကို ဆက်လက်ပေါက်ကြားခြင်း မပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း သူမက ရပ်ရန် တောင်းဆိုပြီး နောက်တွင်ပင် ဆက်လက်ပေါက်ကြားနေခဲ့သည်။ "ဗြိတိန်အစိုးရနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့က မန်ချက်စတာဗုံးကွဲမှုအခင်းကို ပြသပုံ ပေါ်သည့် ဓာတ်ပုံများ ကန်သတင်းစာများတွင် ပါလာသည်ကို ကြည့်ပြီး အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်ခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေး ရဲချုပ်က သတင်းပေါက်ကြားခြင်းသည် စုံစမ်းစ်ဆေးရေးနှင့်တစ်ကွ နစ်နာသူများ၏ ယုံကြည်မှုကိုပါ လျော့ကျစေတယ်၊ အိမ်ဖြူတော်က ကြေညာတယ်၊ ငါတို့ အလွန် စိတ်ဆိုးတယ်၊ ဒါ လုံးဝ လက်မခံနိုင်စရာပဲလို့ ပြောတယ်ဟု ဆိုလိုက်သည်။
ဗုံးကွဲပြီး သုံးနာရီခန့်တွင်၊ ကက်သီဒရယ် ကျောင်းဝင်းထဲ သံသယဖြစ်စရာ အရာတစ်ခုကို တွေ့၍ ဗုံးရှင်းလင်းရေး လုပ်ဆောင်ရာ၊ နောက်တော့ အခင်းဖြစ်ရာတွင် ကျန်ရစ်သည့် အဝတ်တထည် ဖြစ်နေသည်။
မန်ချက်စတာ ရပ်ခံများနှင့် တက္ကစီကုမ္ပဏီများက ဖျော်ဖြေပွဲတွင် ပြန့်ကျဲ ကျန်ရစ်သော သူများကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးရန်၊ နေရာထိုင်ခင်းပေးရန် တွစ်တာမှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။ ဖျော်ဖြေပွဲ တက်လာသော ကလေးများ၏ မိဘများသည် ဗုံးပေါက်မှု အကျိုးဆက်ကြောင့် တကွဲတပြား ဖြစ်သည်။ အနီးရှိ ဟိုတယ်တစ်လုံးက ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နေရာရွှေ့လာသော ကလေးများအတွက် ခိုလှုံရာတစ်ခု အဖြစ် ဖွင့်လိုက်ပြီး၊ မိဘများကို အရာရှိများက လမ်းညွှန်ခေါ်လာပေးသည်။
ဇာတ်ရုံအောက်ဘက်ရှိ မန်ချက်စတာဗစ်တိုးရီးယား ဘူတာရုံကို လူရှင်းလင်းပြီး၊ ပိတ်ပစ်ကာ ပြေးဆွဲခြင်း ရပ်လိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့အထိလည်း ဗစ်တိုးရီးယားဘူတာရုံသည် ပိတ်ထားတုန်းပင်။
ထရက်ဖို့စင်တာနှင့် အန်းဒေးစင်တာ ဈေးဝယ်စင်တာတို့မှာလည်း သံသယဖြစ်ဖွယ် အထုပ် တွေ့၍ အချိန်ခဏတာ လူများ ရှင်းလင်းခဲ့ရသည် ဆိုသည်။ ၂၄ မေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၌ ဘီဘီစီ ၅ ရေဒီယို စတူဒီယိုသည် လိုက်ဖ်လွှင့်နေစဉ် ၂ နာရီ၌ လူများ ရှင်းလင်းခဲ့ရသလို၊ မန်ချက်စတာလေဆိပ် အပေါက် ၁ ၌ ထွက်ခါနီး လေယာဉ်သည်လည်း ပြန်ဆင်းခဲ့ရသည်။ ဆယ်လ်ဖို့ တက္ကသိုလ်အဆောက်အဦတစ်လုံး၌လည်း ညနေ ၄ နာရီခန့်က ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ကလေး ဖြစ်လိုက်သည်။
မန်ချက်စတာ အကြီးတန်းရဲအရာရှိများ ကိုဘရာအစည်းအဝေးအပြီးတွင်၊ အီယန် ဟော့ပကင်း၊ ဝန်ကြီးချုပ် သီရဆာ မေးတို့က ယူကေ၏ အကြမ်းဖက် အခြိမ်းခြောက်ခံရသည် အဆင့်ကို အရေးကြီးဆုံးသို့ တိုးမြှင့်လိုက်သည်။ အော်ပရေးရှင်း တင်ပါရာကို ပထမဆုံးအကြိမ် အသက်ဝင်စေပြီး၊ နိုင်ငံတဝန်း ကာကွယ်ရန် စစ်သား ၅၀၀၀ အထက်ကို လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ထပ်မံအင်အား ဖြည့်လိုက်သည်။ ပါလီမန်လွှတ်တော်များ ခရီးစဉ်နှင့် ဘာကင်ဟမ်နန်းတော်၌ အစောင့်စစ်သားများ လူချိန်းခြင်းအခမ်းအနားကို နောက်တစ်နေ့တွင် ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်။ ဒေါင်းနင်းလမ်းနှင့် လန်ဒန်ရှိ အခြား အစိုးရအဆောက်အဦများကို စောင့်ကြပ်ရန် စစ်သားများ ချထားသည်။
ဝန်ကြီးချုပ် သီရဆာ မေးနှင့် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဂျယ်ရမီ ကောဘင်က ဗုံးခွဲမှုကို ရှုံ့ချလိုက်ပြီး၊ နစ်နာသူများကို ဘုရင်မကြီးက ဝမ်းနည်းကြောင်း ထုတ်ပြောသည်။ တိုက်ခိုက်မှုအပြီး နောက်နှစ်ရက်ကြာ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးသည် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်ခြင်းကို ရွှေ့ဆိုင်းကြသည်။ မန်ချက်စတာကြီး မြို့တော်ဝန် ဘန်းဟမ်က တိုက်ခိုက်မှုကို 'မကောင်းဆိုးဝါး'ဟု ခေါ်ပြီး၊ နောက်တစ်နေ့ညတွင် အဲလဘတ်ရင်ပြင်တွင် ကင်းစောင့်ပြီး နှိုးကြားမှု ရှိရမည်ဟု ကြေညာသည်။ ဘန်းဟမ်၊ ကောဘင်၊ အောက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန် ဘားကောင်းနှင့် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အမ်ဘာ ရုဒ်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ လန်ဒန်မြို့တော်ဝန် ဆဒက် ခန်းက သူ့၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်တွင် ရေးသားသော စာထဲ၌ တိုက်ခိုက်မှုကို ရှုံ့ချထားသည်။
ရိုမေးနီးယား၊ အဇာဘိုင်ဂျန်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ကနေဒါ၊ တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမနီ၊ ဂရိ၊ ဟန်ဂေရီ၊ အိန္ဒိယ၊ အီရန်၊ အစ္စရေး၊ ဂျပန်၊ ကင်ညာ၊ မလေးရှား၊ နယ်သာလန်၊ နော်ဝေ၊ ပါလက်စတိုင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ရုရှား၊ စင်္ကာပူ၊ စပိန်၊ ဆွီဒင်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများစွာမှ အစိုးရနှင့် ခေါင်းဆောင်များ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယို ဂူတာရက်စ်၊ ဓနသဟာယ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပတ္ထရစ်ရှာ စကော့တလန်၊ ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဂျိန်း ကလောက် ဂျန့်ကာ၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန့်စစ်၊ နှင့် အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့စည်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့က ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ ပေးပို့သည်။
အရီယာနာ ဂရန်ဒီက သူမ၏ တွစ်တာအကောင့်၌ "အသည်းတွေ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကို ကွဲပါတယ်၊ ကျမ အရမ်းအရမ်း ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ပြောစရာ စကားလုံး မရှိပါဘူး" ဟု ရေးခဲ့သည်။ သူမ၏ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီး၊ ဖလော်ရီဒါရှိ အိမ်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။
↑ Pesic၊ Alex။ "Manchester Arena terror attack: 22 dead, 120 injured"၊ men၊ 23 May 2017။
↑ "Fans criticise Manchester Arena security after terror attack at Ariana Grande concert" (in en-GB)၊ The Independent၊ 23 May 2017။
↑ ၄.၀ ၄.၁ "Deaths confirmed after Manchester Arena blast reports"၊ BBC News၊ 22 May 2017။ 22 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Police: "Confirmed fatalities" after reports of explosion at Manchester Arena။ CBS News။ 22 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester Arena explosion: What we know so far"၊ Sky News၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇.၀ ၇.၁ "Manchester attack: city mobilises to help concert-goers with offers of rooms and free rides" (in en)၊ The Guardian၊ 22 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "British prime minister raises nation’s threat level, saying another attack 'may be imminent'"၊ Washington Post။
↑ Danny Boyle, Barney Henderson, Leon Watson – Live Manchester Arena attack: 22 killed at Ariana Grande concert as bomber named as Salman Abedi – The Daily Telegraph (London). 23 May 2017.
↑ "Manchester Arena: children among 22 dead in suicide attack at Ariana Grande concert – latest"၊ The Guardian၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Who are the victims of the Manchester terror attack?". telegraph.co.uk. Retrieved 25 May 2017.
↑ Schladebeck, Jessica (25 May 2017). "All 22 Manchester bombing victims named, including seven young girls". New York Daily News. Retrieved 25 May 2017.
↑ MANCHESTER BOMBER SALMAN ABEDI ‘WENT OFF THE RAILS’ AS A TEENAGER, SAYS RELIGIOUS LEADER။ 25 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester Arena attacker named by police as Salman Ramadan Abedi"၊ The Guardian၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester attack: Who was Salman Abedi?"၊ BBC။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Salman Abedi named as the Manchester suicide bomber – what we know about him"၊ Daily Telegraph၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "his parents were Libyan refugees who came to the UK to escape the Gaddafi regime"
↑ "Manchester attack: Who was the suspect Salman Abedi?"၊ BBC News။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "His parents escaped to Britain as refugees from Libya."
↑ "Salman Abedi named as the Manchester suicide bomber – what we know about him"၊ The Daily Telegraph၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Salman Ramadan Abedi named by police as Manchester Arena attacker"၊ The Guardian၊ 23 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Manchester bomber was part ofanetwork – police။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Police Investigate ‘Network’ of Salman Abedi, Manchester Bomber"၊ The New York Times၊ 24 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nagesh၊ Ashitha။ "Muslim community worker 'warned officers about Manchester bomber five years ago'"၊ 24 May 2017။
↑ Simpson၊ Fiona။ "Manchester attack: Bombing suspect named as Salman Abedi, police confirm"၊ Evening Standard၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester suicide bomber named as 22-year-old from city"၊ Financial Times၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Manchester attack: Police hunt 'network' behind bomber (24 May 2017)။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester bomber Salman Abedi had ‘proven’ links with Islamic State"၊ The Times၊ 24 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "UK on highest alert: Three more arrested amid hunt for active terrorist cell after Manchester bomb"၊ The Sydney Morning Herald၊ 24 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Younger brother of Manchester bomber was ‘planning to stage an attack’ in Libya, authorities say"၊ Washington Post၊ 24 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Danny Boyle Leon Watson Barney Henderson Chris Graham (2017-03-25). "Manchester bombing latest: Counter-terror police make fresh arrest in Moss Side as US repairs intelligence riftÂ". Telegraph.co.uk. Retrieved 2017-05-26.
↑ Chivers၊ C.L.။ "Found at the Scene in Manchester: Shrapnel,aBackpack andaBattery"၊ The New York Times၊ 24 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester attack: US leaks about bomber irritating – Rudd"၊ BBC News၊ 24 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ewen MacAskill in London and Julian Borger in Washington (24 May 2017)။ US officials leak more Manchester details hours after UK rebuke။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Manchester attack: 'Fury' at US 'evidence' photos leak။ BBC (24 May 2017)။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester Arena attack: 22 dead and 59 hurt"၊ BBC News၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Isis claim responsibility for the Manchester attack that killed 22"၊ Metro၊ 23 May 2017။
↑ Smith၊ Rory။ "Explosion, Panic and Death at Ariana Grande Concert in England"၊ The New York Times၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Deaths, injuries after reports of explosion at Ariana Grande concert at Manchester Arena: Police။ ABC News (22 May 2017)။ 22 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pesic၊ Alex။ "Manchester Arndale shopping centre evacuated – live updates"၊ Manchester Evening News၊ 23 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Rucki၊ Alexandra။ "Manchester Arena Bombing – Live"။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Latest updates as UK terror threat level raise"။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "PM Theresa May raises UK threat level to 'critical'"၊ 23 May 2017။ "Raising the level to critical means that military personnel could be deployed to support armed police officers – part ofaplan known as Operation Temperer."
↑ Alan Travis [alantravis40] (23 May 2017)။ PM says Critical Threat level's Operation Temperer will use up to 5,000 troops to take over armed police patrol duties under police command.။
↑ Bennhold၊ Katrin။ "3 Men Arrested in Investigation of Manchester Bombing"၊ The New York Times၊ 24 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Manchester Arena attack: What we know so far"၊ BBC News၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Jeremy Corbyn pays tribute to victims of Manchester terror attack"၊ The Daily Telegraph၊ 23 May 2017။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jenny.minard။ "A message from Her Majesty The Queen to the Lord-Lieutenant of Greater Manchester"၊ The Royal Family၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Campaigning suspended as world leaders pay respects (23 May 2017)။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “Leaders of political parties did not hesitate to suspend General Election campaigning in the wake of the terror attack in Manchester. ... Campaigning for the 8 June vote will remain suspended forasecond day on Wednesday.”
↑ "Manchester Arena: children among 22 dead in explosion at Ariana Grande concert"။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ General election campaigning suspended after Manchester attack။ The Guardian (22 May 2017)။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Andy Burnham says spirit of Manchester will prevail after 'evil act'"၊ London Evening Standard၊ 23 May 2017။
↑ "Manchester Arena explosion: Latest updates"၊ BBC News၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Corbyn attends Manchester vigil and insists: “Our hearts are broken but our resolve has never been stronger”။ 24 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sadiq Khan's statement on the attack in Manchester, posted on Twitter။
↑ Palazzo၊ Chiara။ "'An attack on innocents': World reacts with shock and horror to Manchester explosion"၊ The Daily Telegraph။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "UN chief strongly condemns terrorist attack on Manchester concert"၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Statement by Commonwealth Secretary-General Patricia Scotland on terror attack in Manchester"၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Statement by European Commission President Jean-Claude Juncker following the attack in Manchester"၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Pope Francis offers condolences to Manchester attack victims"၊ Catholic Herald၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 24 May 2017။
↑ "OIC Secretary General Condemns the Deadly Attack in Manchester, the United Kingdom"၊ 23 May 2017။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ariana Grande [ArianaGrande] (23 May 2017)။ broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.။
↑ "Ariana Grande Suspends Tour After Manchester Attack" (in en)၊ Rolling Stone။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Ariana Grande Returns Home to Florida After Manchester Concert Attack" (in en)၊ US Weekly။ 23 May 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၁၇_မန်ချက်စတာ_ဇာတ်ရုံ_ဗုံးကွဲခြင်း&oldid=705893" မှ ရယူရန်
၂၀၁၇ အတွင်းရှိ ဗြိတိသျှနိုင်ငံ
ဤစာမျက်နှာကို ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၆:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။